Four-in-one ubambo aphume exchange of AC Kuhlangana ihlanganiswe izingxenye AMJ2-4003H / 1003HX4 - China Shanghai IPKIS
Four-in-one ubambo aphume exchange of AC Kuhlangana izingxenye ihlanganiswe AMJ2-4003H / 1003HX4
Uhlolojikelele AMJ1 busbar ihlanganiswe ingxenye kuyinto yokuxhuma ingxenye Modular elaklanywa IPKIS for ezintathu okhombisa legatsha multi-legatsha ukuhlanganiswa zamanje. Isakhiwo kuyinto icwecwe futhi enhle, futhi uxhumano ekahle futhi iphephile. Through the design Modular, ukusebenza kuyinkimbinkimbi Umugqa kuhlukane lula ukuba umane qinisa nge ukufakwa kokumqoka kuphela. Ngesikhathi esifanayo, lo module kungenziwa spliced ​​ngokusho izidingo legatsha langempela, okuyinto usindisa kakhulu zabasebenzi Izindleko nesikhala izindleko, kanye connec ...
AMJ1 busbar ihlanganiswe ingxenye kuyinto yokuxhuma ingxenye Modular elaklanywa IPKIS for ezintathu okhombisa legatsha multi-legatsha ukuhlanganiswa zamanje. Isakhiwo kuyinto icwecwe futhi enhle, futhi uxhumano ekahle futhi iphephile. Through the design Modular, ukusebenza kuyinkimbinkimbi Umugqa kuhlukane lula ukuba umane qinisa nge ukufakwa kokumqoka kuphela. Ngesikhathi esifanayo, lo module kungenziwa spliced ​​ngokusho izidingo legatsha langempela, okuyinto usindisa kakhulu zabasebenzi Izindleko nesikhala izindleko, futhi uxhumano muhle.
uxhumano Soft Sebenzisa Amabha zethusi ezithambile ukuxhuma ukushintshwa bese busbars
uxhumano Hard zenziwa ngokusebenzisa izinsimbi yethusi busbars
Ubukhulu Specific ngokuvumelana nesidingo langempela ukucacisa Ukucaciswa, sicela usinikeze ukusetshenziswa imibuzo funa.
Usayizi Case: 630 * 214 * 92
Kuqiniswe ibhasi AMJ2integrated busbar
inkinobho Main 400A ezintathu okhombisa icala olubunjiwe switch
I-Sub-switch 100A ezintathu okhombisa icala olubunjiwe switch
uxhumano Main uxhumano ezithambile
I-Sub-uxhumano uxhumano ezithambile
● lasekuqaleni angenalutho zethusi ethangeni ibe inkinobho Modular efakwe ngqo.
imikhiqizo ● zingahlelwa ezihlukahlukene izindlela: izimbambo, ethutha esilandelayo, phezu olandelayo.
● module yethu kungaba zonke ezithambile irowu ethangeni, inkinobho ngqo ngenhla module, Isikhala adjustable, ukunciphisa kakhulu isikhala chassis.
● irowu wethu oyinhloko kanye ye-irowu eziklanyelwe ngocingo isakhiwo, efanelekayo ezahlukahlukene sethusi yanjalo aziphonse, ilungiselelo inkinobho diversification, ukuze kuhlangatshezwane nezidingo ahlukahlukene amakhasimende.
● igobolondo ovikelayo nge PA66 impahla.
● Umugqa main zethusi eliphezulu.
● ibhasi yesikhathi esifushane ukumelana wamanje (Icw): 18KA ngenhla;
● uxhumano engenayo: ezintathu okhombisa / ezine-isigaba 250A ~ 800A, irowu esithambile noma esiqinile;
● busbar: conductivity eliphezulu zethusi nickel Plating;
● igobolondo zokuzivikela: PA66;
● busbar ukujiya: ukalwe nganoma 4-10mm;
● uxhumano legatsha: engaphezu kwezinkulungwane ezimbili isigaba ezintathu okhombisa / ezingaphezu kuka 63A, irowu esithambile noma esiqinile.
Shanghai IPKIS Power Technology Co., Ltd. gxila okuhlangene combiner ibhokisi izinhlelo kanye nezakhiwo ezihambisana, kagesi power ukusatshalaliswa amasethi ephelele yocwaningo kagesi uxhumano ubuchwepheshe nokuthuthukiswa nokusebenzisa yesayensi ucwaningo utshalomali iminyaka ngeminyaka, isicelo se-patent lavuma ukuba kumiswe othile enobuhle indilinga, ezesayensi ucwaningo ukuguqulwa kuyinto ejabulisayo, Shanghai Tech ibhizinisi; inkampani muhle at izinzuzo professional kanye lobuchwepheshe inkampani uhlelo ukunikeza kagesi uxhumano izixazululo, nge, ukubambisana kwethu nabo professional esifike ngesikhathi futhi ngokushesha, sakhele eyengeziwe kumakhasimende, namakhasimende yakha eduze nokusekela ubuhlobo, ngokusebenzisa iminyaka eminingi Kuye akha imodeli esiyingqayizivele ibhizinisi futhi wasungula umbuthano emvelweni kuhambisana nentuthuko enempilo wamabhizinisi. Ngaphansi ngemuva samanje overcapacity, ukuthuthukiswa kwezobuchwepheshe kanye nokuhlanganiswa zezimboni, kubalulekile ukuba ngenkuthalo ukuhlola imibono emisha sokusinda nokuthuthukiswa kwamabhizinisi amancane.
izinga lomkhiqizo ibhizinesi khadi wethu, ngoba izinga siyakulahla ingakuvumeli ukucabangela nokuqhwandela. Sikhathazeke mayelana nemininingwane, intuthuko eqhubekayo, lokhu isitifiketi esisodwa, kuba omele abasebenzi zonke IPKISer sika.
Previous: Emuva-agibele amahhashi photovoltaic AC Kuhlangana izingxenye ihlanganiswe ezine-in-one AMJ1-2503S / 0633SX4
Olandelayo: Lean eziyisithupha ibe photovoltaic AC Kuhlangana ihlanganiswe izingxenye AMJ2-4003H / 1003HX6
180a agesi Distribution Ibhokisi
6 1 Combiner Ibhokisi
Dc agesi Distribution Ibhokisi
High Quality Solar Combiner ibhokisi
Panel Combiner Ibhokisi Solar
Plastic Solar Dc Junction Ibhokisi
PV Array Combiner Ibhokisi
PV Array String Combiner Ibhokisi
PV Panel String Ibhokisi
PV elanga Iphaneli Combiner Ibhokisi
Solar Combiner Ibhokisi 16
Solar Ip65 Combiner Amabhokisi
Solar Module Junction Ibhokisi
Solar Module String Ibhokisi
Kwama-solar Panel Dc Combiner Ibhokisi
Solar String Combiner Ibhokisi
Lean eziyisithupha ibe int photovoltaic AC Kuhlangana ...
Ulenga ngezansi komgwaqo ezintathu ibe conver PV AC ...
Emuva-agibele amahhashi amane-in-one photovoltaic AC conver ...
Emuva-hung ngaphansi indlela engena photovoltaic AC co ...
Emuva-agibele amahhashi ngaphansi komgwaqo emihlanu ibe photovo ...
Ucingo: 0086-139 1638 0446
Ifeksi: +0086 021-5763 1897
Ikheli: Shanghai IPKIS Power Technology Co., Ltd